BB,CC and DD cream တွေက တကယ် မိတ်ကပ်သားပါးတာလား? - For her Myanmar
BB,CC and DD cream တွေက တကယ် မိတ်ကပ်သားပါးတာလား?
ယောင်းတို့ ကြုံဖူးလားတော့ မသိဘူး။ ဆိုင်ထဲ ဝင်လိုက်လို့လေ BB cream, CC cream လေးများ မကိုင်လိုက်နဲ့ ကိုင်လိုက်တာနဲ့ ‘ဒါက မိတ်ကပ်သားအရမ်းပါးတယ် ညီမလေးရဲ့.. အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ဘူး.. ဒါလေးကမှ မျက်နှာမှာ အဖုအထစ်တွေအများကြီး ရှိတဲ့ လူမျိုးအတွက် အဓိကထုတ်ထားတာ’ ဆိုပြီး ဖောင်ဒေးရှင်းဘက်ပဲ ယက်ကန်ယက်ကန် ပါသွားဖူးတယ်မလား? ကိုယ်လည်းမသိဘူးလေနော့်။ ကြာတော့ အဲ့အဆိုကြီးက တကယ်လိုလို သူများတွေကို ပတ်ပြီး ဆရာလုပ်ခဲ့တာ။ ဒီဘက်မှာ ထရိန်နင်စတက်တော့မှ ကိုယ့်ရဲ့သက်တမ်းတစ်ဝက်စာလောက်က ‘အမလေး ဂျင်းမိပါပြီရှင်၊ ဂျင်းမိသွားပါပြီရှင့်၊ ဂျင်းလေးကို ပက်လက်မှောက်ခုံ မိသွားပါပြီရှင်’ ဖြစ်ခဲ့တာကို သိလိုက်ရတာ။ တကယ်ရော သူတို့က မိတ်ကပ်သား ပါးနေတာလား?
Related Article >>> မိတ်ကပ်လိမ်းသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ AA BB CC DD EE နဲ့ PP
အမယ် ချက်ချင်းအဖြေကို ပေးမယ်ထင်သွားတယ်ပေါ့? ဘယ်ရမလဲ ဉာဏ်စမ်းလေးနဲ့ အရင်ဦးနှောက်စားဦးမှာ။ ပထမဦးဆုံး BB cream ထဲမှာဘာတွေပါလဲ၊ CC cream ထဲမှာ ဘာတွေပါလဲဆိုတောကို သွားကြည့်ကြမယ်နော်။
BB cream ကို Beauty Balm cream လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်တဲ့။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ အလှအပကိုဆောင်ကျဉ်းပေးမယ့် ခရင်မ်ပေါ့။ သူ့နာမည်လေးအတိုင်းပဲ တကယ်လည်း ယောင်းတို့ရဲ့ မျက်နှာအသားအရေမှာလိုအပ်တဲ့ ရေဓာတ် (Moisturizing)၊ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ဓာတ် (Anti-Aging)၊ အသားအရေကို ပိုပြီးကြည်လင်တောက်ပစေတဲ့ဓာတ် (Brightening)၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ဓာတ် (SPF/PA)၊ မိတ်ကပ်အောက်ခံ (Primer)၊ အပြစ်အနာအဆာတွေကို ဖုံးအုပ်ပေးတဲ့မိတ်ကပ်အထူ (Concealer) နဲ့ ဝက်ခြံကိုထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ (Acne-Control) စတဲ့ Skincare effect လေးတွေပါဝင်ပါတယ်။
CC cream မှာတော့ BB cream နဲ့အပေါ် ၆ မျိုးလုံးပါဝင်တာတူပြီး နောက်ဆုံး Acne-Control နေရာမှာ သူက Color Corrector လို့ခေါ်တဲ့ အောက်ခံအသားအရေကို ညီသွားအောင် အရောင်ညှိပေးတဲ့ မိတ်ကပ်သားပဲ အစားထိုးပါဝင်ပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြား DD cream ကတော့ BB နဲ့ CC နှစ်မျိုးလုံးမှာရှိတဲ့ effect အားလုံးပါဝင်ပြီး အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ အဆင့် စုစုပေါင်း ၈ မျိုးရှိတဲ့ မိတ်ကပ်အရည်ပါနော်။ အင်းးး ဒီလောက် Skincare တွေအများကြီးပါနေရင်တော့ တကယ်ပဲ မိတ်ကပ်သားပါးပြီထင်ပါရဲ့….
Related Article >>> BB နဲ့ Foundation ယှဉ်ရွေးရမယ်ဆိုရင်…
တကယ်တမ်းကျတော့ မိတ်ကပ်သားအထူအပါးက သူတို့ကိုထုတ်တဲ့ တံဆိပ်အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ နှင်းတို့သုံးနေကျ မိတ်ကပ်အရည်တွေမှာ မိတ်ကပ်ပါးတာ၊ ထူတာမျိုးရှိသလို BB,CC နဲ့ DD cream ကလည်း သူတို့နဲ့ သဘောတရား အတူတူပါပဲ။
တစ်ခုထူးခြားတာက ဒီBB,CC နဲ့ DD cream တွေမှာ အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ဓာတ်တွေ အများကြီးပါဝင်နေတာမို့ ထိလွယ်ခိုက်လွယ်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေနဲ့ အထူးသင့်တော်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုအသားအရေပိုင်ရှင်တွေက မိတ်ကပ်အတင်မခံဘူး၊ တင်လိုက်တာနဲ့ အဖုတွေက ပိုထွက်လာတယ် ဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်ကြတယ်။ အဲဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ ယောင်းလေးတို့ လိမ်းလိုက်တဲ့ မိတ်ကပ်ထဲမှာ SPF လောက်ပဲအများဆုံးပါပြီး ကျန်တာက ရိုးရိုးမိတ်ကပ်တွေပဲ ဖြစ်နေလို့ပါ။
ဒါပေမဲ့ တော်တော်များများ ဆန်းဆန်းတင့် အသားအရေပိုင်ရှင်သမားတွေက ဒီအမျိုးအစားသည် မိတ်ကပ်သားပါးတယ်ပြောလို့ လက်ရှောင်နေကြတာတွေ့ရတော့ အက်ဒ်မင်နှင်းတစ်ယောက် ပြေးလွှားရှာဖွေ၊ ထရိန်နင်ဆင်းထားတဲ့ အသိလေးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးဖြစ်သွားတာပါလို့။
အကူအညီဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်နော်။ နောက်နေ့တွေမှာလည်း ဒါမျိုးလေးတွေ ထပ်ရေးဦးမှာမို့ ဆက်ဆက်စောင့်ကြည့်ပေးပါဦးနော်။
ယောငျးတို့ ကွုံဖူးလားတော့ မသိဘူး။ ဆိုငျထဲ ဝငျလိုကျလို့လေ BB cream, CC cream လေးမြား မကိုငျလိုကျနဲ့ ကိုငျလိုကျတာနဲ့ ‘ဒါက မိတျကပျသားအရမျးပါးတယျ ညီမလေးရဲ့.. အဆငျပွမှော မဟုတျဘူး.. ဒါလေးကမှ မကျြနှာမှာ အဖုအထဈတှအေမြားကွီး ရှိတဲ့ လူမြိုးအတှကျ အဓိကထုတျထားတာ’ ဆိုပွီး ဖောငျဒေးရှငျးဘကျပဲ ယကျကနျယကျကနျ ပါသှားဖူးတယျမလား? ကိုယျလညျးမသိဘူးလနေေျာ့။ ကွာတော့ အဲ့အဆိုကွီးက တကယျလိုလို သူမြားတှကေို ပတျပွီး ဆရာလုပျခဲ့တာ။ ဒီဘကျမှာ ထရိနျနငျစတကျတော့မှ ကိုယျ့ရဲ့သကျတမျးတဈဝကျစာလောကျက ‘အမလေး ဂငျြးမိပါပွီရှငျ၊ ဂငျြးမိသှားပါပွီရှငျ့၊ ဂငျြးလေးကို ပကျလကျမှောကျခုံ မိသှားပါပွီရှငျ’ ဖွဈခဲ့တာကို သိလိုကျရတာ။ တကယျရော သူတို့က မိတျကပျသား ပါးနတောလား?
Related Article >>> မိတျကပျလိမျးသူတိုငျး သိထားသငျ့တဲ့ AA BB CC DD EE နဲ့ PP
အမယျ ခကျြခငျြးအဖွကေို ပေးမယျထငျသှားတယျပေါ့? ဘယျရမလဲ ဉာဏျစမျးလေးနဲ့ အရငျဦးနှောကျစားဦးမှာ။ ပထမဦးဆုံး BB cream ထဲမှာဘာတှပေါလဲ၊ CC cream ထဲမှာ ဘာတှပေါလဲဆိုတောကို သှားကွညျ့ကွမယျနျော။
BB cream ကို Beauty Balm cream လို့လညျး ချေါပါတယျတဲ့။ အဓိပ်ပာယျကတော့ အလှအပကိုဆောငျကဉျြးပေးမယျ့ ခရငျမျပေါ့။ သူ့နာမညျလေးအတိုငျးပဲ တကယျလညျး ယောငျးတို့ရဲ့ မကျြနှာအသားအရမှောလိုအပျတဲ့ ရဓောတျ (Moisturizing)၊ အရှယျမတိုငျခငျ အိုမငျးရငျ့ရျောခွငျးကို ကာကှယျပေးတဲ့ဓာတျ (Anti-Aging)၊ အသားအရကေို ပိုပွီးကွညျလငျတောကျပစတေဲ့ဓာတျ (Brightening)၊ ခရမျးလှနျရောငျခွညျကို ကာကှယျပေးတဲ့ဓာတျ (SPF/PA)၊ မိတျကပျအောကျခံ (Primer)၊ အပွဈအနာအဆာတှကေို ဖုံးအုပျပေးတဲ့မိတျကပျအထူ (Concealer) နဲ့ ဝကျခွံကိုထိနျးသိမျးပေးတဲ့ (Acne-Control) စတဲ့ Skincare effect လေးတှပေါဝငျပါတယျ။
CC cream မှာတော့ BB cream နဲ့အပျေါ ၆ မြိုးလုံးပါဝငျတာတူပွီး နောကျဆုံး Acne-Control နရောမှာ သူက Color Corrector လို့ချေါတဲ့ အောကျခံအသားအရကေို ညီသှားအောငျ အရောငျညှိပေးတဲ့ မိတျကပျသားပဲ အစားထိုးပါဝငျပါတယျ။ ထူးထူးခွားခွား DD cream ကတော့ BB နဲ့ CC နှဈမြိုးလုံးမှာရှိတဲ့ effect အားလုံးပါဝငျပွီး အသားအရထေိနျးသိမျးတဲ့ အဆငျ့ စုစုပေါငျး ၈ မြိုးရှိတဲ့ မိတျကပျအရညျပါနျော။ အငျးးး ဒီလောကျ Skincare တှအေမြားကွီးပါနရေငျတော့ တကယျပဲ မိတျကပျသားပါးပွီထငျပါရဲ့….
Related Article >>> BB နဲ့ Foundation ယှဉျရှေးရမယျဆိုရငျ…
တကယျတမျးကတြော့ မိတျကပျသားအထူအပါးက သူတို့ကိုထုတျတဲ့ တံဆိပျအပျေါမှာပဲ မူတညျပါတယျ။ နှငျးတို့သုံးနကြေ မိတျကပျအရညျတှမှော မိတျကပျပါးတာ၊ ထူတာမြိုးရှိသလို BB,CC နဲ့ DD cream ကလညျး သူတို့နဲ့ သဘောတရား အတူတူပါပဲ။
တဈခုထူးခွားတာက ဒီBB,CC နဲ့ DD cream တှမှော အသားအရထေိနျးသိမျးတဲ့ဓာတျတှေ အမြားကွီးပါဝငျနတောမို့ ထိလှယျခိုကျလှယျတဲ့ အသားအရပေိုငျရှငျတှနေဲ့ အထူးသငျ့တျောတာတော့ အမှနျပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုအသားအရပေိုငျရှငျတှကေ မိတျကပျအတငျမခံဘူး၊ တငျလိုကျတာနဲ့ အဖုတှကေ ပိုထှကျလာတယျ ဆိုတာမြိုးဖွဈတတျကွတယျ။ အဲဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ ယောငျးလေးတို့ လိမျးလိုကျတဲ့ မိတျကပျထဲမှာ SPF လောကျပဲအမြားဆုံးပါပွီး ကနျြတာက ရိုးရိုးမိတျကပျတှပေဲ ဖွဈနလေို့ပါ။
ဒါပမေဲ့ တျောတျောမြားမြား ဆနျးဆနျးတငျ့ အသားအရပေိုငျရှငျသမားတှကေ ဒီအမြိုးအစားသညျ မိတျကပျသားပါးတယျပွောလို့ လကျရှောငျနကွေတာတှရေ့တော့ အကျဒျမငျနှငျးတဈယောကျ ပွေးလှားရှာဖှေ၊ ထရိနျနငျဆငျးထားတဲ့ အသိလေးတှနေဲ့ပေါငျးစပျပွီး ဒီဆောငျးပါးလေးကို ရေးဖွဈသှားတာပါလို့။
အကူအညီဖွဈလိမျ့မယျလို့လညျး ယုံကွညျပါတယျနျော။ နောကျနတှေ့မှောလညျး ဒါမြိုးလေးတှေ ထပျရေးဦးမှာမို့ ဆကျဆကျစောငျ့ကွညျ့ပေးပါဦးနျော။
Tags: bb, cc, coverage, cream, dd, Knowledge, line, makeup, product
Hnin Ei Oo February 18, 2019